अनूदित कथा : रेखा - साहित्य सङ्ग्रहालयसाहित्य सङ्ग्रहालय
← कथा : आमा
गजल : यो साल पनि छा’को छैन →
कती पटक पढियो : 173
अनु : तुल्सीदास महर्जन
बास्केट बोकेकी रेखालाई देख्नासाथ रविन्द्र मुस्कुरायो । रेखाको कलेज पढ्दाको साथी । जवाफमा रेखा पनि मुस्कुराई । सधैंजसो सन्चो, विसन्चो अनि अरु साधारण कुराकानीपछि रेखा हिँड्न हतारिई ।
‘पख रेखा, आज एकदिन तिमी जान हतार नगर, तिमीसँग एउटा कुरा छ’, रविन्द्रले बाटो छेकेर भन्यो ।
‘जाऊँ, उ… त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर चिया पिऊँ, कुरा गरौं’, रविन्द्रले आग्रह गर्यो ।
‘चिया खान नजाऊँ’, रेखाले अप्ठ्यारो मानी ।
‘एकैछिन त हो, खाऊँ न चिया । ल ल जाऊँ, जाऊँ’, रविन्द्रले कर गर्यो ।
‘घरमा धेरै काम छ । सासू बितेको डेढ महिना हुन लाग्यो । डेढमहिने काजक्रिया, संस्कार, भोज (लत्या) का लागि सामान किन्नलाई आएको’, सामानको सूची लेखेको कागज देखाउँदै रेखाले भनी ।
‘चिया खाँदै मेरो कुरा सुन अनि काममा जाऊ, हुन्न ?’ रविन्द्रले कर गरिरह्यो ।
रेखालाई झ्वास्स सम्झना भयो, आज आएर ससुराले हँसिलो मुहारमा ‘चिया ख्वाउन आउनुपर्दैन, पसल जाँदा माइतीमा पनि छिरेर आऊ’ भनेका कुरा । उसले घडी हेरी, दुई बज्न लागेछ । ‘ल एकछिन बसूँ न त’, रेखा तयार भई । उनीहरु सफा रेस्टुरेन्टमा गए ।
उनीहरु आमनेसामने मेचमा बसे । रविन्द्रले दुइटा स्पेसल चिया अर्डर गर्यो । उसले खानेकुरा पनि अर्डर गर्न लागेको थियो, रेखाले नखाने भनी । एक युवकले तुरुन्तै चिया ल्याइदियो । रविन्द्रले चियाको ग्लास रेखालाई दियो । ‘धन्यवाद’ भन्दै रेखाले चियाको ग्लास हातमा लिई ।
चिया खाँदै रविन्द्रले रेखालाई तलदेखि माथिसम्म हे¥यो । सेतो सुति फरिया लगाइराखेकी, सेतो ऊनकै सल ओढिराखेकी । खुट्टामा पनि सेतै चप्पल, सेतै मोजा । अनुहारमा कति पनि शृङ्गार छैन । कालो टल्केको कपाल कसेर बाटिएको छ । कलेज जाँदा हल्का शृङ्गार गर्ने, राम्राराम्रा लुगा लगाउने रेखा, आज बरखी लुगामा फिक्का कसोकसो देखिएकी छे । उसको रुप नै बदलिएको छ ।
रविन्द्रलाई बरखी लुगाबारे केही भन्न मन लागेन । उसले रेखासँग कलेजका साथीहरुबारे मात्र कुरा ग¥यो । रेखाले चिया पिउँदै चुपचाप सुनिरही ।
उनीहरुले चिया सिध्याए ।
‘रेखा, चिया खाइसकियो । मेरो एउटा कुरा छ, भनूँ कि नभनूँ ?’ रविन्द्रले गिलास एकापट्टि पन्छाएर भन्यो ।
‘हुन्छ भन न, के कुरा ?’ सल मिलाउँदै रेखाले सोधी ।
रविन्द्र एकछिन चुप लाग्यो । रेखाले सल मिलाउँदै रविन्द्रलाई पुलुक्क हेरी ।
‘तिमीले बिहे गर्नुअघि मैले पनि तिम्लाई माग्न पठाएको थिएँ, तिमीलाई थाहा होला’, रविन्द्रले कुरा सुरु गर्यो ।
रविन्द्रको कुरा सुनेर रेखा मुसुक्क हाँसी ।
‘मेरो बिहे छिनिएपछि न तिमीले मलाई माग्न पठायौ । यो कुरा तिमीलाई थाहा थिएन होला’, रेखाले यथार्थ बताई ।
रेखाको कुरा सुनेर रविन्द्र अक्क न बक्क भयो । ‘त्यसो भए म पछि परें । ल भैगो पुरानो कुरा । अब नयाँ कुरा गरुँ । अब फेरि तिमीलाई माग्न पठाऊँ ?’ मुस्कुराउँदै रविन्द्रले भन्यो ।
रविन्द्रको कुराले रेखा अकमकाई । के भनेको होला जसरी । उनको अनुहार एक्कासी गम्भीर भयो । केही बोल्न प्रयत्न गरी । ‘मनोज बितेको छ महिना मात्र भयो । मलाई माग्न नपठाऊ । बरखी लुगा लगाइरहेकी छु’, रेखाले लुगा हेर्दै भनी ।
‘के भयो त ? म तिमीलाई माग्न पठाउँछु’, रविन्द्रले रेखाको हात समाउँदै भन्यो ।
‘नचाहिने कुरा गर्छौ’, रेखाले हात झट्कारी ।
मानिसहरु गफ गर्नमा यति व्यस्त थिए कि कसैले पनि उनीहरुलाई वास्ता गरिरहेका थिएनन् ।
‘अब तिमीले बरखी लुगा लाउनुपर्दैन । हामी कलेजको मिल्ने साथी हौं । बिहे गरेर मिलेर बस्न सक्छौं भन्ने मैले भरोसा लिएको छु’, रविन्द्रले रेखाको हात फेरि समात्यो ।
‘म अब बिहे गर्दिनँ’, अघिजस्तै रेखाले हात झट्कारी ।
‘किन यस्तो भनेकी तिमीले ?
‘रविन्द्र, म लोग्ने गुमाएकी महिलासँग… बिधवासँग… तिमीले…’, रेखाको कुरा पूरा हुन सकेन ।
‘मलाई स्वीकार छ, मैले तिमीलाई अपनाइसकें । तिमीले पनि मलाई अपनाउँछ्यौ भने कसको के लाग्छ ? समाज, नातागोता आफन्तले कुरा काट्लान् भनेर चासो राख्ने समय होइन, जमाना धेरै बदलिइसकेको छ । आजभोलि लोग्ने बितेका महिलाहरुले सेतो बरखी लुगा नै लाउन छोडिसके । तर, तिमीले लगाएको देख्दा म त आजित भएको छु’, रविन्द्रले खुरुरुरु भन्यो ।
रेखा चुप लागी । फ्याट्ट जवाफ दिन सकिन उसले ।
‘तिम्रो परिवार साह्रै पुरानो विचारको हुनुपर्छ, होइन ?’ रविन्द्रले फेरि सोध्यो ।
‘हो, मेरी आमाले खैरो बुट्टा भएको फरिया राखी पठाउँछु भन्दा सासू र फुपूससुराहरु राजी भएनन् । सेतै लाउनुपर्छ रे वर्षभरि । यो सेतो बरखी लुगा बाध्य भई लाउनुपरेको छ’, रेखाले गम्भीर हुँदै भनी ।
रविन्द्र अक्क न बक्क भयो ।
‘लोग्ने बित्दा स्वास्नीले बरखी लुगा लगाउनुपर्ने, स्वास्नी मर्दा भने लोग्नेले बरखी लुगा लगाउनु नपर्ने । यो अनमेल चलन हटाउनुपर्छ भनेर मैले विरोध गर्न सकिनँ । सासू बिती । तर, ससुराले सेतो टोपी पनि लगाउन नमानेको देख्दा म आजित भएँ । सेतो टोपी भए पनि लगाउनुपर्छ भनेर फुपूससुराले पनि भन्न सकेन, दाजुभाइ खलकले पनि भन्न सकेन’, रेखाले मनमा उभारिएको कुरा सरररर बताई ।
रेखाको मनमा विद्रोहको भाव छ, तर विद्रोह गर्ने आँट मात्र नभएको रविन्द्रले बुझ्यो । तर, केही भनेन ।
‘एम.कम. पास हुनासाथ एउटा प्रोजेक्टमा जागीर खाएँ । जागीर खाएको बीस वर्षपछि मेरो बिहे भयो । बिहे गरेको… चार महिना हुँदा मोटरसाइकल दुर्घटनामा मनोज बित्यो । मैले केही गर्न सकिनँ, अस्पताल लाँदालाँदै ऊ बित्यो’, रेखा भावुक भई ।
‘मैले यो कुरा सुनें’, रविन्द्रले भन्यो ।
‘मनोज नहुँदादेखि सासू–ससुराले अलि फरक व्यवहार गर्न थाले । प्रोजेक्टको जागीर पनि सकियो । मैले फेरि अर्को ठाउँमा जागीर खाने इच्छा गरें । तर, सासू–ससुराले घरको काम गर्ने मान्छे हुँदैन, हाम्रो सेवा गर्ने कोही हुँदन भने । एम.कम. गरेकी बुहारीलाई जागीर खान नदिने सासू–ससुरा कति पुराना विचारका हुन्, तिमी आफैं विचार गर न । अनि सासू पनि बिती । ससुरा… ससुरा त सासूभन्दा चर्को, स्वभाव कडा । आपूmले भनेजस्तो भएन भने रिसाउने, गाली गर्छ । ससुरासँग मिल्न नसकेर बिहे गर्नासाथ जेठाजु नजिकै घरमा अलग बस्यो । ससुरासँग बसेकीले मैले नै सहनु परेको छ’, आँखाभरि आँसु पार्दै रेखाले घरको कुरा सुनाई ।
‘रेखा, तिमीले धेरै कुरा सहेर बसेकी छ्यौ । ल भैगो, अब मेरो कुरामा तिम्रो के विचार छ त ?’
‘म अब बिहे गर्दिनँ’, नजिकको टेबुलमा रहेका मानिसहरुलाई हेर्दै रेखाले भनी ।
‘यसो नभन रेखा । एकचोटि राम्ररी विचार गर अनि जवाफ देऊ ।’ रविन्द्रले नेपकिन एक टुक्रा लियो । त्यसमा आफ्नो मोबाइल नम्बर लेख्यो ।
‘ल मलाई फोन गर’, मोबाइल नम्बर लेखिएको नेपकिन दिँदै रविन्द्रले भन्यो ।
रेखाले नेपकिन पर्सभित्र राखी ।
‘अब म जान्छु’, रेखा मेचबाट उठी ।
‘अलि पख न ।’ तर, रविन्द्रले यसो भनेन । ऊ पनि मेचबाट उठ्यो । रेस्टुरेन्टको ढोकाबाहिरबाट रविन्द्रलाई पुलुक्क हेरी तर केही नभनी बाटो लागी ।
रविन्द्र अर्कोतिर लाग्यो ।
असनबजारतिर जाँदै गरेकी रेखालाई रविन्द्रको मात्र सम्झना आइरह्यो । उसले भनेको कुरा मात्र कानमा गुञ्जिरह्यो । रेखालाई सूची हेर्दै पसल चहार्न मन लागेन, माइती छिर्न पनि मन लागेन । उसले भोलि पसल आउने विचार गरी । रविन्द्रको कुरो सम्झँदै सरासर घरतिर लागी ।
रेखा घरमा पुगी । मूलढोकाको खापा एउटा खुल्ला थियो । बाहिरबाट कोही मानिस आयो होला नत्र चौवीसै घण्टा ढोका बन्द गरिएको हुन्थ्यो । घन्टी बजाएपछि मात्र ढोका खोल्ने चलन थियो ।
रेखा खुसुक्क ढोकाभित्र छिरी । भित्र लबीमा एकजोर आइमाईजुत्ता फुकालेर राखिएको छ । को आइमाई आएका होला ? भर्याङनजिकको बैठक कोठामा ससुरा एउटी महिलासँग कुरा गरिराखेको सुनिन्छ । आइमाईको स्वर नयाँ छ, चिनाजानीको होइन । बैठक कोठामा जाऊँ कि नजाऊँ गर्दै रेखा भ¥याङ चढी । र, यसो लुकी । कोटाभित्रबाट आइरहेको स्वरतिर चियो गरी ।
‘ममचा मिठो छ हगी ?’ ससुरा चाहिँले सोध्यो ।
‘अँ मिठो, फस्टक्लास छ’, आइमाई स्वर गुञ्जियो ।
मूलढोकाबाट कोही पसेजस्तो ठानेर रेखाले त्यतातिर हेरी । टोलको मःमः पसलमा काम गर्ने कान्छा रहेछ । कान्छा बैठक कोठाभित्र पस्यो । भित्रबाट ट्याङटिङ आवाज आयो । एकछिनपछि कान्छा जुठो प्लेट र कप लिएर बाहिरियो । ऊ मूल ढोकाबाट पनि बाहिरियो । तर, ढोका लगाएन ।
रेखाले मनमनै सोची, मःमः खाने प्रोग्राम भएकोले चिया ख्वाउन आउनु पर्दैन भनेको रहेछ । ससुराले पसल र माइतीमा पनि छिरेर आउनू भनेको तर आफू भने रविन्द्रसँग चिया खाएर चाँडै घर फर्केको कुरा पनि सम्झी । मनमा शंका उब्ज्यो । उनले कोठाभित्रको कुराकानी ध्यान दिएर सुनिन् ।
‘हेर्नुस् न, मलाई एक्लै धुम्धुम्ती बस्न धेरै गाह्रो भयो’, ससुरा चाहिँले दुःखी हुँदै भन्यो ।
‘अब गाह्रो हुन्न तपाईंको । म एउटा कुरा खुलस्त हुने गरी भन्छु तपाईंको । त्यो केटी घरायसी काममा भने अलि अल्छी छे तपाईंको । के गर्ने ?’ हररररर हाँस्दै आइमाईले भनी । रेखा झसङ्ग भई ।
‘भातसात त पकाउँछे नि ?’ ससुरा चाहिँले सोध्यो ।
‘होइन तपाईंको, त्यो केटी घरको काम गर्न अल्छी छे भनेको । घरायसी काम जाने नजानेको नै थाहा भएन मलाई । पहिले नै भनेन भन्ला भनेर भनिदिएको तपाईंको । त्यो केटी तपाईंसँग आउन त तयार भइसकी तपाईंको । के गरुँ त, भनिदिनुस् तपाईंको’, फेरि हररररर हाँस्दै भनी त्यो आइमाईले ।
सेतो टोपीसमेत लगाउन नमान्ने ससुराले स्वास्नी मरेको डेढ महिना नहुँदै बिहे गर्ने कुरा गरेको सुन्नासाथ रेखाको जीउमा कसैले तातो पानी खन्याएजस्तो भयो ।
‘घरायसी काम गर्न मन छैन भने भैगो, घरमा सबै काम गर्ने बुहारी छ भनिदिनुस् । बुहारी भएर ससुरा र कान्छी सासूको सेवा नगरी सुख ?’ ससुराले फुइँ लाउँदै भन्यो ।
‘त्यही त भन्न खोजेको तपाईंको, नो प्रोब्लम, होइन र तपाईंको । त्यसो भए कुरा पक्का भयो तपाईंको’, हरररर हाँस्दै त्यो आइमाईले भनी ।
कुरा गर्नासाथ हरररर हाँस्नुपर्ने त्यो आइमाईको स्वर पनि ठूलो छ । रेखाले सबै कुरा सुनी ।
‘पक्का भयो… हा…हा…हा…हा’, ससुरा पनि हररर हाँस्न थाल्यो ।
‘भर्याङमाथि बसेर कुरा सुनिराखेकी रेखालाई उकुसमुकुस भयो । जाडो याममा पनि उसको अनुहारमा तरतरी पसिना आयो । उसलाई अरु सुन्ने धैर्य नै भएन । ऊ निमेषमै माथि कोठामा गई । जुत्ता फुकाली । खाली बास्केट र पर्स टेबुलमा राखी । ढोकाको चुकुल लगाई । अनि खाटमा घोप्टो परी हिक्कहिक्क गरी ।
आँखाबाट खसेको आँसु र नाकबाट आएको सिँगान पुछ्दै कोठानजिकको बाथरुममा पसी । मुख धोई, रुमालले बेस्सरी अनुहार पुछी अनि बाथरुमबाट बाहिर निस्की । कोठाभित्र यताउति हल्लिँदै सोची, ससुराले बिहे गर्न लागेको कुरा माइतीमा दौडेर गई आमालाई भनूँ कि, कोही साथीलाई भन्न जाऊँ कि । के गरुँ कसो गरुँ भयो उनलाई । फेरि खाटमा बसी ।
उसलाई सासू जिउँदो छँदाको कुरा सम्झना भयो । सासू–ससुरा दुवैले आफूलाई जागीर खान नपठाएको, लोग्ने बितेपछि आफूलाई हेला गरेको । यी सब सम्झीसम्झी रेखा रन्थनिई । फेरि खाटबाट जुरुक्क उठी ।
मैले पढेकी छु, जागीर खानुपर्छ अथवा अरु कुनै रोजगारी गर्नुपर्छ । मैले आफूलाई आर्थिक रुपमा बलियो बनाउनुपर्छ । रेखाले मनमा कुरा खेलाई ।
झ्वास्स रविन्द्रको सम्झना भयो । उसको कानमा रविन्द्रको कुरा गुञ्जियो । ऊ झ्यालतिर गई, एकफेर विचार गरीे । अनि टेबुलनजिक उभिई । उसको आँखाले रविन्द्र र जागीर एकसाथ उभिरहेको देख्यो ।
‘अब मैले सहेर यो घरमा बसिराख्नु भनेको नोकर्नी बन्नु हो । त्रिसठ्ठी वर्षको ससुराले सासू बितेको डेढ महिना नहुुँदै बिहे गर्दैछन् । म अठ्ठाइस वर्षकी युवती, लोग्ने बितेको छ महिना भयो । मैले फेरि बिहे गर्न किन नहुने ? बिहे गरुँ कि नगरुँ भनेर अब म आमालाई सोध्न जान्नँ, कोही साथीभाइसँग पनि सोध्न जान्नँ, समाजसँग पनि स्वीकृति लिन्नँ । मैले आफूलाई सोधिसकें, मेरो मनले हुन्छ भनिसक्यो, म मेरो मनको कुरा सुन्छु । अब मेरो पाइला मेरो मूल ढोका भेट्टाउन अगाडि बढ्छ’, मनमनै रेखाले विद्रोहको रेखा कोरी ।
टेबुलमा राखिएको पर्स खोली । पर्सबाट मोबाइल झिकी । नेपकिन कागज पनि झिकी । रविन्द्रको नम्बर हेर्दै मोबाइल डायल गरी ।
मोबाइलमा सम्पर्क भयो ।
‘हेलो’, उताबाट रविन्द्रको स्वर गुञ्जियो ।
केही भन्नुअगाडि रेखाले आफूले ओढिराखेको सेतो सल फुकाली ।
(शशीकला मानन्धर नेपाल भाषाकी पहिलो महिला उपन्यासकार हुन् । उनी नेपाली भाषामा पनि लेख्ने गर्छिन् । साइली, नामी जस्ता उनका उपन्यासहरु नेपाली साहित्यमा चर्चित छन् । उनले थुप्रै फुटकर कथाहरु पनि लेखेकी छिन् ।)
(स्रोत : Emulyankan)
This entry was posted in अनूदित कथा and tagged Sashikala Manandhar, Tulasidas Maharjan. Bookmark the permalink.